चुनावको यो वर्ष « Loktantrapost
चुनावको यो वर्ष
३१ चैत्र २०७३, बिहीबार २३:०६
नयाँ वर्ष २०७४ सुरु भएको छ । हरेक वर्ष ‘मात्र ३६५ दिनको गन्ती’ लिएर आउँदैन । नयाँ वर्षको गर्भभित्र थुप्रै घटना र परिवेश पनि सँगसँगै हुन्छ । फरक यति मात्र हो कि कुनै लेखिएर आउँछन् भने कुनै अलिखित भएर आउँछन् र लेखाएर जान्छन् । यो वर्ष २०७४ पनि यस्तै अलिखित तर लेखाएर जाने केही घटनाहरुलाई सँगै लिएर आएको अनुमान गर्न सकिन्छ । ती अनुमानमध्ये पनि चुनावी वर्षको रुपमा यो वर्षलाई भन्न सकिन्छ ।
यो वर्षको क्यालेन्डरमा अहिलेसम्म वैशाख ३१ गतेमा मात्र स्थानीय तहको चुनावको मिति तोकिएको भए पनि त्यस भन्दा पर पनि थुप्रै चुनाव र चुनावबाट उत्पत्ति हुने घटनाहरु यो वर्षको क्लालेन्डरमा अलिखित भएर आएको छ ।
यसै त स्थानीय तहको चुनावको महिनाको रुपमा वैशाख महिना अरु महिना भन्दा अलि बढी व्यस्त महिना हुने देखिन्छ । तर २०७४ को क्यालेन्डरमा अरु थुप्रै यस्ता महिना आउँदैछन्, जसमा हामी चुनावी माहोलमा होमिने छौँ । नेपालको संविधानमा भएको बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण स्थानीय तहको चुनावसँगै प्रदेश र सङ्घीय संसदको चुनाव पनि यही वर्षको माघ ७ गते भित्र गर्नै पर्ने अवस्था छ । त्यसैले पनि यो वर्ष चुनावी वर्ष हुन्छ भन्दा बढाइचढाइ नहोला ।
चुनाव भन्ने बित्तिकै मात्र मतदान र हारजीतलाई मात्र बुझेर पुग्दैन । चुनाव भन्दा के को चुनाव ? यो चुनावले कस्ता प्रतिनिधि छान्ने हो ? उनीहरुको काम के हो ? जस्ता मात्र होइन आम नागरिकका लागि यो चुनावले के कस्ता कुरामा फाइदा पुग्छ भन्ने समेत चुनावी कुरासँग जोडिएको हुन्छ । तेति मात्र होइन, नेपालको संविधानले कल्पना गरेको राज्यको तीन तहको सत्तामा कुन सत्ता कसको पकडमा जान्छ वा कुन तहमा कुन राजनीतिक दल हाबी हुन्छ भन्ने कुराले पनि देश कुन मार्गमा अगाडि बढ्छ भन्ने निर्भर गर्दछ ।
चुनावी वर्ष भएकाले नै पनि २०७४ मा नेपाली नागरिकका लागि एउटा अवसर पनि छ । अवसर यस मानेमा कि चुनाव भनेको नेतृत्व स्थापित गर्ने मौका पनि हो । चुनावमा खास गरी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु मैदानमा उत्रने गर्दछन् तर ती प्रतिनिधिहरु पनि आम नागरिक बिचबाटै जाने हुनाले एकैपटक धेरै नागरिकहरु ह्वात्तै नेतृत्व तहमा पुग्ने अवसर चुनावले प्रदान गर्दछ ।
नयाँ वर्ष नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने वर्षका रुपमा आम नागरिकले लिने हो भने यथास्थितिबाट बाहिर आउन र लामो समयदेखि रोकिए झैं भएको राजनीतिक सँगसँगै आर्थिक विकासको गति बढाउन पनि यो चुनावी वर्ष महत्वपूर्ण हुने सङ्केत देखिएको छ । स्थानीय तहमा मात्रै ६ हजार ६ सय ८० वडाबाट ३३ हजार ४ सय निर्वाचित प्रतिनिधिका रुपमा नयाँ नेतृत्व आउँदैछन् भने ७ सय ४४ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी एक हजार ४ सय ८८ जना नगरपालिका र गाउँपालिका हाँक्ने नेतृत्व थपिनेछन् । यसरी हेर्दा स्थानीय तहको चुनावबाट मात्रै ३४ हजार ४ सय ८८ जना नयाँ नेतृत्व बैशाख ३१ गते लगत्तै उत्पादन हुने निश्चित छ ।
२०६४ र २०७० को संविधान सभाको चुनाव बाहेक अन्य यो मुलुकले चुनावलाई आत्मसाथ गर्न सकेको थिएन । लामो समयको चुनावी खडेरीपछि लगातार रुपमा यो वर्ष मात्र ३ वटा महत्वपूर्ण चुनाव हुने भएकाले पनि यो वर्ष यस अघि र पछिका कयौँ वर्ष भन्दा नितान्त फरक वर्ष हो । त्यसैले पनि आम नागरिकले स्थानीय तहदेखि प्रादेशिक र केन्द्रीय सत्तामा कसलाई स्थापित गराउने भन्ने निक्र्यौल गर्ने वर्ष हो २०७४ । त्यससँगै बर्षौदेखि रहेका मुद्दाहरुलाई जनताका पक्षमा रुपान्तरित गर्दै जनमुखी शासन व्यवस्थालाई स्थापना गर्ने वर्ष पनि हो २०७४ । समग्रतामा हेर्दा यो वर्ष २०७४ एउटा चुनावी इतिहास कोरिने वर्षका रुपमा हाम्रा सामु आएको छ ।
त्यसैले यो वर्ष आम नेपाली नागरिक थप उत्साही, जागरुक हुनुका साथै थप चनाखो समेत हुनु पर्ने अवस्था छ । अन्त्यमा यो चुनावी वर्षलाई सही ढङ्गबाट उपयोग गर्न सकिएन भने फेरि वर्षौंसम्म नेपाली जनताले पछुताउनु शिवाय अरु केही बाँकी रहने छैन । सबैले चनाखो बनौँ र सही समयमा सही निर्णय गर्न यो वर्षले हामीलाई सहयोग गरोस् । नयाँ बर्ष २०७४ को सबैलाई शुभकामना !!